Vanoratidza maitiro ekuvhura iPhone nekodhi kuburikidza nechisimba simba | IPhone nhau
Zvakawanda zvakataurwa nezvazvo "Mabhokisi matema" vimbiso iyoyo yekuvhura chishandiso cheIOS pamitengo iri pakati pe12.000 ne15.000 euros. Nekudaro, zvinoita senge ndiyo chete nzira. Muongorori wezvekuchengetedza aratidza kuti inokwanisa kuvhura iPhone yakanyorwa kuburikidza nehurongwa hwechisimba.
Ngatitarisei iyi vhidhiyo yekuda kuziva umo mushandisi anoratidzira kuvhura iyo iPhone mune dzidziso nenzira iri nyore, iyo inogona kuchengetedza mari kune avo vanoshandisa zviuru zvemamiriyoni pamabhokisi aya anotendera mukana kune iPhone. Mubvunzo izvozvi ndouyu: Inguva yakareba sei iyo Apple ichatora kugadzirisa izvi kuburikidza neyekuchengetedza chigamba?
Muongorori wezvekuchengetedza Mathew hickey uyo akabata ZDNet ndiye anga aratidza nzira iyi yekuda kuziva pane yake Twitter account, kunyangwe chokwadi chiripo ndechekuti haitsanangure zvakawanda nezve maitiro akateverwa ayo.
Hechino chirevo chaApple pane izvo zvino zvaramba iOS Passcode brute simba kurwisa, uye chinongedzo kune rumwe ruzivo.https://t.co/9M3wvVJ7nQ pic.twitter.com/bXzpkd0Izt
Akatsanangura kuti vanobatanidza iyo iPhone kana iPad kune ino sisitimu inotumira zvido kune iyo keyboard, ichipa kukoshesa kwakanyanya pamusoro pevamwe vakasara vechigadzirwa. Pinda makodhi ekupinda rimwe nerimwe uye wozomira kwechinguva. Aya ndiwo maitiro ayo anofungidzirwa kupfuura neiyo iPhone data kukiya uye pukuta system.
Ichokwadi ndechekuti haina kunyatso kujekesa kuti inozviita sei, chokwadi ndechekuti Apple yatofunga nezve izvi uye kune iOS 12 system yakaverengerwa iyo inodzivirira kubiridzira kuburikidza nekureba USB kubatana. Chimwezve chitsauko muhondo yakanyanya pakati pevabirimi uye kambani yeCupertino. Dambudziko nderekuti nzira iyi haigone kutarisirwa 100% inoshanda, zvakanyanya kutsanya, zvichave pachena kuti zvinoenderana nesimba repassword pachayo. Ticharamba tichitaura nezve mukana uyu wekupinda kune imwe nyika iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vanoratidza maitiro ekuvhura iPhone nekodhi kuburikidza nechisimba chisimba